ဗဟုသုတစုံ Archives - Page 95 of 106 - MM Live News
စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေရင်.. ဒီစာကို မဖြစ်မနေဖတ်လိုက်ပါ…..
September 24, 2018 MM Live8 Comments on စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေရင်.. ဒီစာကို မဖြစ်မနေဖတ်လိုက်ပါ…..
ကောင်းလိုက်တဲ့စကား သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေ ရှစ်သောင်း ခြောက်ထောင့်လေးရာ (၈၆, ၄၀၀) ရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်က သင့်ဆီက ၁၀၀တန်တရွက် ခိုးသွားတယ်။ ဒါဆိုရင် သင် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့… အဲဒီလူကို လိုက်ရှာဖမ်းဖို့အတွက် သင့်ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံ (၈၆, ၃၀၀) လုံးကို ပုံပြီးသုံးမလား။ ဒါမှမဟုတ်…မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေမလား။ အဖြေ ကတော့ ရှင်းပါတယ်။ စိတ်ပြေ လက်ပျောက်ပဲ နေမှာပေါ့။ ၁၀၀လောက်လျော့သွားတာ အတွက် ဘာကြောင့် မအိပ်နိုင် မစားနိုင်ဖြစ်နေမလဲ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒါဆို သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တနေ့တာမှာ စက္ကန့်ပေါင်း ၈၆, ၄၀၀ ရှိတယ်။ အဲဒီထဲက တစုံတယောက်ကြောင့်… စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ အချိန် တစ်မိနစ်ကျော်ကျော် (စက္ကန့် ၁၀၀လောက်) အတွက်နဲ့ ဘာကြောင့်များ စိတ်ဆိုးဒေါသတွေ […]
လူငယ် အပျိုငယ်များ လိင်ကိစ္စ တွေကို မက်ဆေ့ခ်ျ ကနေ ပို့နေကြတဲ့ နောက်ကွယ်မှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လိင်မှုကိစ္စများ…
September 24, 2018 MM LiveLeaveaComment on လူငယ် အပျိုငယ်များ လိင်ကိစ္စ တွေကို မက်ဆေ့ခ်ျ ကနေ ပို့နေကြတဲ့ နောက်ကွယ်မှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လိင်မှုကိစ္စများ…
သင်ဟာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း မကိုင်ဘဲ ဘယ်လောက် ကြာကြာ နေနိုင်ပါ သလဲ။ ကြိုးဖုန်းလဲ မသုံးပါနဲ့။ ရုပ်သံလဲမကြည့်ပါနဲ့။ ရေဒီယိုလဲ နားမထောင်ပါနဲ့။ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တာ ဘာတစ်ခုမှ မသုံးပါနဲ့။ လျှပ်စစ်မီး ကိုပါ ပိတ်ထား လိုက်ပါ။ လူတွေဟာ နည်းပညာ၊ အီလက် ထရွန်းနစ် နဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တွေကို ဘယ်လောက်ထိ စွဲလန်းကြ တယ်ဆိုတာကို စမ်းသပ် နေကြတဲ့သုတေသီများ က ဖော်ပြပါ အတိုင်း ညွှန်ကြား နေတာပါ။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျ၊ ချက်တင်တွေ အမျိုးအစား စုံလင်စွာနဲ့ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရှင် တွေ၊ သမီးရည်းစား တွေကြားမှာ ဖောက်ပြန်မှု တွေ ကြောက်ခမန်း လိလိ […]
၇ တန်းအောင် လူငယ်လေး ဘဝကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ အထိကြိုးစားခဲ့ရတာ ဆောက်လုပ်ရေးရွှေခေတ်ကို မှီပြီိး ကံကောင်းဖို့ ဆိုတာ လိုအပ်ပေမယ့် အဲဒီ ကံ တစ်ခုထဲ နဲ့ ဘယ်ဖြစ်လာပါ့မလဲနော့ လူငယ်လေး တစ်ယောက် ၇ တန်းပြီးတော့ ရွေးချယ်စရာ နည်းပါးတဲ့ခေတ်မှာ ရှမ်းပြည်ဖက်မှာ ကားဝပ်ရှော့ လုပ်ဖြစ်တယ် . နောက် ဓားပြတွေ ရန်ကြောက်လို့ ရန်ကုန်ကို အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ တက်လာတယ် .ရန်ကုန်ရောက်တော့ ၃ ဘီး မောင်းတယ် . ၃ ဘီး မောင်းနေရင်း လက်ဖက်ခြောက် ကုန်သည်နဲ့တွေ့လို့ အဲဒီအိမ်မှာ ဒရိုင်ဘာ လုပ်ရာကနေ အရောင်းအဝယ်ပညာ သင်ယူခဲ့တယ် . အိမ်ထောင်ကျ ကလေးရပြီး […]
September 24, 2018 MM Live News11 Comments on လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ..တစ်လလုံးမှာ လပြည့်ည တစ်ညပဲနော်
Zawgyi လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော် (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ (၂) တာဒိသံ တေဇသမ္ပန္နံ ၊ ဗုဒ္ဓံ ဝန္ဒာမိ အာဒရံ။ နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ၊ သဗ္ဗေ ပူရေ န္တု သင်္ကပ္ပါ။ ဂါထာတော် မြန်မာပြန် အနက် (၁) နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညဉ့်အခါ၌သာ […]
September 24, 2018 MM Live News20 Comments on ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့(ဘုရားရှိခိုး ပူဇော်ရသော အကျိုး ရှစ်မျိုး )
ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ့ ဆေးတယ်လို့မှတ် စက်ကရိယာတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်တယ်လို့ စိတ်ထဲ မှာ နှလုံးသွင်း ထား။ ဘုရားရှိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ်တော် ပွားတာ မေတ္တာပို့ တာ ထွက်လေဝင်လေ စူးစိုက်ပြီးမှ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် တရားထိုင် တာဟာ ကျန်းမာရေး လဲရ စိတ်ခွန်အား လဲကောင်း စိတ်ကြံခိုင်ရေး လဲတိုးတယ် ကိုယ်ခန္ဓာ ခွန်အား တိုးတက် ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံခိုင်ရေး လဲတိုးတက် အကုန်လုံး အကောင်းတွေချည်းပါပဲ။ ဘုရားရှိခိုး_ပူဇော်ရသော_အကျိုး_ရှစ်မျိုး […]
လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀၀၀ က ဘ၀ကို ပြန်မြင်နိုင်စွမ်းရှိသူ…
September 23, 2018 MM LiveLeaveaComment on လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀၀၀ က ဘ၀ကို ပြန်မြင်နိုင်စွမ်းရှိသူ…
ခေါင်းစဉ်ကို မြင်ပြီး သုတဇုန်တော့ ပေါက်ကရရေးပြီဟု မထင်စေလိုပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သိပ္ပံသုတေသနပညာရှင်များ နဲ့ သတင်းဌာနကြီးတွေ စစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တဲ့ တကယ်ဖြစ်ရပ်ပါ။ သက်ရှိထင်ရှားနေခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ ဒီလို ပြီးခဲ့တဲဘ၀တွေကို မှတ်မိတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေနဲ့ သိပ်တော့ မစိမ်းပေမယ့် အခုဖြစ်ရပ်လိုမျိုး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၀၀ ခန့်ကို အတိအကျပြန်မြင်ခဲ့သူရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကတော့ ရှားပါးဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် သုတဇုန် မိတ်ဆွေများထံ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ အာသာဖလားဝါဂျူး(Arthur Flowerdew)…။ ဗြိတိသျှ တပ်မတော်က အငြိမ်းစားအရာရှိတစ်ဦး…။ သူ့ဟာ ထူးခြားတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီအိပ်မက်ကို သူ ၁၀နှစ်သား အရွယ်လောက်ကတည်းက မက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါကတော့ ‘ထူးခြားဆန်းကြယ်သော အနီရောင်မြို့တော်ကြီး’ တစ်ခုကို မကြာခဏထင်ထင်ရှားရှား မြင်မက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ […]
“အခက်ခဲကြုံတွေ့လာတိုင်း နွားလိုမကျင့်ပဲ ကျွဲလိုကျင့်ပါ”
September 23, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on “အခက်ခဲကြုံတွေ့လာတိုင်း နွားလိုမကျင့်ပဲ ကျွဲလိုကျင့်ပါ”
“အခက်ခဲကြုံတွေ့လာတိုင်း နွားလိုမကျင့်ပဲ ကျွဲလိုကျင့်ပါ” ကျွန်တော်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းက ဘူလ်ဒါရွာလေးမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ကော်လိုရာဒိုနယ်မြေဟာ လှပတဲ့ ကျောက်တောင်ကြီးတွေရှိတာကြောင့် ရှုခင်းလှပလို့ နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ ကျောက်တောင်တွေကြားမှာ စိမ်းလန်းပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ကြီးတွေ ရှိတယ်။ နွားစားကျက်လုပ်လို့ နေရာကောင်းလို့ အဲဒီမှာ ကျွဲတွေရော၊ နွားတွေရော တွေ့ရတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွဲအုပ်နဲ့ နွားအုပ်ကိုအတူတူ တွေ့ရတာ ဒီတနေရာထဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ကျွဲတွေနဲ့ နွားတွေရဲ့ သဘာဝကို သေသေချာချာ လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီအထဲက လေပြင်းမုန်တိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်ပုံ မတူကြတာပါ။ အနောက်ဖက်ကနေ မုန်တိုင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ နွားအုပ်ကြီးဟာ အရှေ့ဖက်ကို ပြေးကြတယ်။ နွားဆိုတာက အပြေးသန်ကြတာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မုန်တိုင်းဟာ ခဏနဲ့ သူတို့ကို မှီလာတယ်။ […]
အသစ်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ မူးယစ်ဥပဒေ အသစ်ကို နားလည်မှု့လွဲပြီး ထောင်ထဲမရောက်ချင်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်ထား။
September 23, 2018 MM Live News83 Comments on အသစ်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ မူးယစ်ဥပဒေ အသစ်ကို နားလည်မှု့လွဲပြီး ထောင်ထဲမရောက်ချင်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်ထား။
အသစ်ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ မူးယစ်ဥပဒေ အသစ်ကို နားလည်မှု့လွဲပြီး ထောင်ထဲမရောက်ချင်ရင် ဒါလေးတော့ဖတ်ထား။ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဥပဒေကိုကျွန်တော် နားလည်သလောက်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူငယ်တွေဟာ ဥပဒေအသိဉာဏ်နည်းပါးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေကိုလွဲမှားစွာ သဘောပေါက်ဖို့များနေပါတယ်. ဆေးခြောက် ၁၀၀ ဂရမ်တောင်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးအိပ်ကပ်ထဲထည့်ပြီးယူသွားရင်တိုင်ပတ်ကုန်မှာပါ. အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော် နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ် အဲ့ဒါဆို . . အရင်ဆုံး မပြင်ဆင်ရသေးတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မအဟောင်းကဘာတွေလဲ.? #ပုဒ်မ( ၁၅ )- သုံးစွဲမှု -ထောင်ဒဏ် ( 3-5 )နှစ်ထိ #ပုဒ်မ (16 -ဂ) – လက်ဝယ်ထား /တွေ့ – ထောင်ဒဏ် (5-10) နှစ်ထိ (ယခင်က ဆေးခြောက် ၂၅ ဂရမ်ထိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်. တကယ်လို့ ၂၅ ဂရမ်ကျော်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ? ၂၅ ဂရမ်ထက်ကျော်ရင်တော့ ပုဒ်မ( ၁၉ )နဲ့ […]
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၅) ဦး”
September 23, 2018 MM Live NewsLeaveaComment on “မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၅) ဦး”
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး (၅) ဦး”. ကျွန်မ လက်လှမ်းမှီ သလောက် (၅) ဦးလို့သာ ဆိုလိုက်တာပါ တကယ်တော့ တခြား ဒီထက် ထူးချွန် ကြ ၊ တော်ကြတဲ့ အမျိုးသမီး တွေ ရှိဦးမှာပါ ။ စကားမစပ် အမျိုးသမီး ရော ၊ အမျိူးသား များရော အခြား LGBT များပါမကျန် ” Happy Women’s day ” ပါလို့ (၁) ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့် သူကတော့ ကျွန်မ တို့ နိုင်ငံ မှာ ပထမဆုံး super market ကို စတင်ဖွင့်လှစ်သူ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့် ဟာ […]
September 23, 2018 MM Live News8 Comments on အိမ်တစ်အိမ်မှာ လာဘ်ပွင့် အိမ်အေးအောင် ဒါတွေ လုပ်ပါ
အိမ်တစ်အိမ်မှာ လာဘ်ပွင့် အိမ်အေးအောင် ဒါတွေ လုပ်ပါ (1) ဘုရားပန်း နှင့် သောက်တော်ရေ ဆွမ်း ဆီမီး အမြဲကပ်ပါ။ ဘုရားပန်း မနွမ်းပါစေနဲ့။ ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများ မပူပါစေနဲ့။ သောက်တော်ရေကို သတိရတိုင်းကပ်ပါ။ (2)ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် အိမ်ဝန်းအတွင်း မှီတင်းစောင့်ရှောက်နေထိုင်ကြသော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ မြင်အပ် မမြင်အပ် သတ္တဝါများအားလုံးကို မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ။ (3)အလွန် ကံညံ့ လာဘ်ပိတ်နေလျင် ညသန်းခေါင် ပရိတ်ရွတ်ပါ။ ည 12နာရီနောက်ပိုင်းသည် နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ လူ့ပြည်သို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုချိန်ဖြစ်၍ ညဘက် ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ဆုတောင်းလျင် ပို၍ ဆုတောင်းပြည့်စေပါတယ်။ (4)အိမ်မှာ အဟောင်းအစုတ်တွေ မထားပါနဲ့။ အချိူ့အိမ်တွေမှာ နှမြောပြီး ထားတတ်ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ပုလင်းကွဲတွေ ဒန်အိုးပေါက်တွေ အဝတ်အစားစုတ်တွေ ဘယ်လိုမှ […]